Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin Oo La Wareegay Deegaanka Teed. – Bogga Calamada.com
Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin Oo La Wareegay Deegaanka Teed.
Wararka ka imaanaya deegaanka Teed ee duleedka Degmada Xudur ee Wilaayada Baay iyo Bakool ayaa sheegaya in Ciidamada Mujahidiinta ay weerar qorshaysan maanta barqadiiku qaadeen saldhig Maleeshiyaatka Ridada ay ku leeyihiin deegaanka.
Weerarka ayaa bilawday abaare 11:00 barqanimo ee maanta oo Isniin ah, waxaana dagaal kooban kadib Mujaahidiinta u suurtagashay inay gabi ahaan gacanta ku dhigaan deegaanka Teed iyo saldhigii maleeshiyaatka Ridada ahaa ee halkaas ku yaallay.
Saraakiil ka tirsan ciidamada Jabhada Wilaayada Baay iyo Bakool oo la hadlay Idaacada Andalus ayaa xaqiijiyay in dagaalka lagu dilay 4 katirsan Maleeshiyaatkii Murtadiinta ahaa ee ku sugnaa xerada la weeraray, sidoo kalena laga qaniimaystay afartii qori ee ay watteen. Sidoo kale Mujaahidiinta ayaa gacanta ku dhigay dhamaan saanadii milatari ee taallay xerada Murtadiinta.
Maleeshiyaatkii Ridada ahaa ee ka firxaday saldhiga la weeraray ayaa u kala yaacay dhanka dhulka duurka ah ee ku heeran deegaanka Teed.
Deegaanka Teed ee ay Maanta Mujaahidiintu weerarka ku qabsadeen ayaa ku yaalla wadada u dhaxaysa Magaalooyinka Xudur iyo Ceel Barde, Waxaana uu 30 Kiilo Mitir Dhanka Waqooyi kaga beeganyahay Degmada Xudur ee Wilaayada Baay iyo Bakool.